Puntland oo ciidamo cusub geysay degmada Badhan kuwii horana ka saartay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaPuntland oo ciidamo cusub geysay degmada Badhan kuwii horana ka saartay
Puntland oo ciidamo cusub geysay degmada Badhan kuwii horana ka saartay
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaarayo degmada Badhan, Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Puntland, oo maalmo ka hor gaaray degmada Badhan, ayaa si rasmiya loogu wareejiyay Amniga degmadaas. Booliiska magaalada Badhan ayaa Shaqada laga fariisiyay, waxaana Ciidanka Daraawiishta lagu amray in ay hawlgal xooggan ka bilaaban gudaha magaalada, si loo xaqiijiyo Amniga oo muddooyinkii u dambeeyay habacsanaan laga dareemay.
Dhanka kale dad goobjoogayaal ah ayaa MOL u sheegay in magaalada Badhan gabi-ahaanba laga nadiifiyay astaamaha maamulka Somaliland, islamarkaana ay xabsiga dhigaan, haddii cid ka tirsan Somaliland isku dayo in ay soo gasho gudaha degmada Badhan. Sidoo kale, waxa Ciidanka la faray in ay si adag ula dagaallaman dadka ka ganacsada maandooriyaha, gaar ahaanna Khamriga kuwaas oo mudooyinkii dambe ku soo badanayay magaalada Badhan.